Fitaovam-panorenana Deep Drawing Aluminium Discs Kilaodina vita amin'ny fantsom-pofona - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Shuanglin Jiate dia mpamokatra lehibe sy mpamatsy ny alim-pitaratra aluminium miorina ao amin'ny China Alloy: 1000series, 3000series.
Aluminium Pure Aluminium, toa ny Alloy 1050, 1060, 1070, 1100 ary Alloy Aluminum Circle, toy ny Alloy 3003. Samy azo ampiasaina amin'ny famokarana alimina ny ala maina sy ny tsy hafanana.
Aluminium Circle, toy ny alimo, dia ampiasaina betsaka amin'ny fanaovana fitaovana aluminio, toy ny saosy fonosana alika, pizza pan, fitaovana fampiasa. Ara-dalàna raha matevina amin'ny 0.3mm - 10mm, diameters avy amin'ny 100mm-800mm. Manome faribolana goavam-be miaraka amin'ny hateviny mandra-pahatongan'ny 5mm dia mandra-pahatongan'ny 1200mm, izay mety hanome izay rehetra ilainao. Mampiasa ny fitaovana tsara indrindra hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra izahay, izay miantoka ny kalitaon'ny alim-bary misy alim-borona ho an'ny fenitra iraisam-pirenena.
Ny kalitao DC sy CC dia natao ho an'ny kasety alimentaire cookie, fa ny kalitao DC dia tsara kokoa. Raha mahavita mamokatra lafarin-tsakafo lafarinina tsara ianao, azonao ampiasaina mandritra ny fotoana lava.
Aluminium Fitrandrahana lamba na alim-bary aluminium ho an'ny vilany na fanoratana
Alloy: 1050, 1070, 3003, 8011
Fahavetavetana: 0.3mm mankany 6.0mm, ankapobeny 0.5mm mankany 4.5mm
Faritra ambany: 150mm mankany 1300mm, ankapobeny 200mm mankany 700mm
Fihetsiketsehana: Amin'ny alàlan'ny plywood dia mety amin'ny sambo ny sambo
Fampiasana: ho an'ny vilany na fanoratana
Sarin'ny takelaka Aluminium (CC sy DC)
1) Legge: 1050, 1060 1100, 3003, 5052, 3004, 3005, 3104, 3105, 5005 sns.
2) Tempoly: Toe-javatra samihafa
3) Thickness: 0.3-6.0mm
5) Pallet Weight: Momba ny 1MT
6) Packing: Fandefasana standard, hazo palettes.
7) Ny fe-potoana: 30 andro
8) Vidy kely ambany: 1 taonina isaky ny habeny.
9) Ny fe-potoana fandoavam-bola: T / T, tsy mendrika ny L / C amin'ny fahitana.
10) Ambony: Miorina tsy misy pentina
11) orinasa: Shina
firaka Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ca V Ti Other Min Al
Fanatsarana tsy tapaka
Ny tanjon'ny rafitra fanaraha-masontsika dia ny hanatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra, ny tolotra ary ny vokatra vokarintsika mba hahazoana fahafaham-po amin'ny mpanjifa anatiny sy ivelany.
Ny laboratoire santé dia manana fitaovana izay nataon'ilay mpamokatra ambony indrindra manerantany.
Azon'izy ireo atao ny manao fanandramana toy ny: famakafakana ny vokatra momba ny fitrandrahana, ny fanadihadiana mekanika, ny fanadihadiana amin'ny metaly, ny simulation ny tontolo iainana, ny fitsaboana hafanana, ny fandinihina ny fitsirihana, ny fandalinana korontana, ny tetikasa
Ny orinasanay dia nanangana ny sampan-draharahan'ny fanaraha-maso sy ny labosy Aluminium mba hanaraha-maso ny kalitaon'ny famokarana izay hanondrana ny firenena hafa.
Aoka ho afaka amin'ny alikaola, dendrina, fampidiran-doko, scratches, tain-koditra, fanodinana oksidia, fialana, korrosion, marika fehiloha, loto mitoka-monina ary fahalemena hafa izay hanelingelina ny fampiasana azy.
Amboarina tsy misy marika mainty, fery madio, tavy pery, fanodidinan'ny milina fanontam-pirinty, toy ny gko interne Control hafa.
1060 Aluminum Circle, 1070 Aluminum Circle, 1100 Aluminum Circle, 3105 Aluminum Circle, 5052 Aluminum Circle, 8011 Aluminum Circle, kodiarana alim-borona
1050 1060 1070 Aluminium Disc / Aluminium Sheet Aluminum Sheet / Aluminum Wafer